Isexwayiso ngabaduni abaphonsa amatshe ezimotweni | Scrolla Izindaba
Isexwayiso ngabaduni abaphonsa amatshe ezimotweni
Abashayeli bezimoto banxuswa ukuthi bahlale beqaphele abaduni abaphonsa amatshe phezu kwezimoto uma beshayela emgwaqeni omkhulu u-N2 no-N3 KwaZulu-Natali.
Ngempelasonto, abashayeli abaningana baba yizisulu zalesisenzo esifundazweni, kubalwa nesithuthi seziguli esasiphuthuma.
Kodwa-ke, lokhu kuzama ukuduna kuphazanyiswe ngesikhathi umshayeli wesithuthi seziguli ehamba ngejubane.
Ngale ndlela yokuduna, abaduni bama emabhulohweni aphezulu bese bephosa amatshe ezimotweni ezihamba ngaphansi kwawo.
Ezinye zalezi zigameko zenzeke ngaseKing Shaka International Airport ngaku-N2.
Akukho ukulimala okuqinisekisiwe, kodwa izimoto eziningana zilimele.
UThabani Ngcobo usikhumbula kahle isikhathi lapho ifasitela lakhe langaphambili laphazanyiswa yitshe elikhulu ngenyanga edlule eMhlanga, enyakatho yeTheku. “Ngezwa ukuqhuma okukhulu kungazelelwe kwathi uma ngima ngibheka ukuthi yini eyayishaye ifasitela lami langaphambili, ngadunwa imoto.”
Uxwayise abanye abashayeli ukuthi bangami uma beshaywa ngamatshe emigwaqweni emikhulu.
“Vele uphuthume esiteshini samaphoyisa esiseduze noma lapho okufakwa khona uphethiloli futhi kunabantu abaningi khona,” kusho uNgcobo.
U-Ashley Naicker ukwenze kahle lokhu ngesikhathi imoto yakhe ishaywa yitshe elikhulu ebelisophahleni lwayo ngoMgqibelo ebusuku e-Westville.
Ngesikhathi ema ngemuva kwamamitha ambalwa, wabona amadoda amathathu egijima eza kuye.
“Ngingene emotweni ngasuka ngesivinini ngaya egaraji eliseduze lapho engikwaze ukuxhumana khona namaphoyisa,” kusho yena.
Ngowe-2018, umfana oneminyaka eyisikhombisa u-Abdur Raheem nodadewabo omdala u-Amina Haffejee babulawa bobabili ngemuva kokuba imoto yabo ishaywe yitshe okusolwa ukuthi laphonswa lisuka ebhulohweni elingaphezulu ku-N2 phakathi koThongathi nase-Ballito.
Amathiphu okubalekela abaduni bamatshe avela ku-Automobile Association (AA):
● Qaphela izindawo ezidla lubi zamatshe futhi uzigweme, ikakhulukazi ebusuku.
● Gada imithombo yezokuxhumana, imgwaqo kanye nezokuphepha ukuthola izibuyekezo ngaphambi kohambo ngalunye.
● Faka zonke izinto eziyigugu ebhuthini zingabonakali.
● Faka ifilimu ekhethekile yokuphepha kwewindi.
● Hlala uqaphile, ikakhulukazi uma udlula ngaphansi kwebhuloho.
● Shintsha imizila ukuze usuke kunoma yikuphi ubungozi obusolisayo.
● Uma ukwazi ukweqa ukuhlaselwa, kubike kuziphathimandla.
Umthombo wezindaba i-Scrolla, ushicilelwe yi-Olduvai Pty, ebhalise nemithetho yokuziphatha nokusebenza ngendlela efanele, ngokushicilela izindaba eziyiqiniso, ezinembayo, nezinobulungiswa. Uma singahambisani nemithetho yokuziphatha ngendlela efanele, uma kungakapheli izinsuku ezingama-20 kushicilelwe lowo mbhalo, sicela uthintane noMmeli Womphakathi ku-011 4843612, nakwi-fax ethi: 011 4843619. Ungathintana Nomphathi wamacala ku-kha[email protected] noma ufake isikhalazo kumthombo wezindaba i-Scrolla ku: www.presscouncil.org.za